Faaydaalee dammaa kanniin beektuu? - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Fayyaa fi Jaalala Fayyaa fi Hawaasa Faaydaalee dammaa kanniin beektuu?
Damma heddummeessuunis rakkoo fayyaa qabaachuu mala
Faaydaa guyyatti bishaan gayaa dhuuguun qaama keenyaaf qabu beekna. Bishaan damma qabuu dhuguun hoo faaydaa dabalataa nuuf laata? Eeyyen!
Bishaan damma qabu dhuguun hedduu bu’a qabeessa ta’uu isaati kan ragaaleen addadaa mul’isan. Faaydaa dammi qaamaaf laatu kana argachuun kan danda’amu bishaan xiqqoo oo’etti damma bulbulanii dhuguudhaan. Kana godhuu dandeenye taanaan faaydaalee dammaa kanniin asii gaditti tarreeffaman wolitti baana jechuudha.
Sukkaara dhiigaa madaalawaa taasisa.
Balaa dhibee onneef saaxilamuu hir’isa.
Qaamni akka dhibee garagaraa irraa uftiksu taasisa (boosts immune system)
Gogaa qaamaa qullqulleessa, qaamni akka ifuufi bareedu taasisa.
Qilleensa garaa nama bokossu hir’isa.
Summii fi balfa qaama keessaa dhiqee baasa.
Kokkee goggogde (sababa qufaanis ta’uun nimalaa) laaffisa ykn fayyisa.
Faydaalee asii olitti tarreefamaniin alatti, dammi faaydaa adanyoo (allergy) namarraa hir’isuu, yaadannoo namaa gabbisuu, humna cimsuu, akka hirribni nama fudhatu taasisuufi madaa fayyisuus akka qabu beekameera.
Dammi sukkaara qama. Sukkaarri dammaa sukkaara adii guyyuu fayyadamnuun adda. Ta’us garuu, damma heddummeessuun rakkoo fayyaa (ilkaan balleessuus dabalatee) addaddaa qabaachuu mala. Faaydaan dammaa gara gubbaatti tuqaman kan argannu yoo damma daangaa osoo hindabarsin itti fayyadamne qofa ta’uu hubachutu nurra jira.
SOURCE lifehack & medical daily
dhibee ufirraa tiksuu
Previous articleMuummichi Minsteraa Haylamaaraam Dassaalenyi kaabinee isaa ifa taasise
Next articleAkka ardii Afrikaatti haalli Bulchiinsa Gaarii Itoophiyaa sadarkaa maalirra jira?